Ny mpanonta amin'ny rindrina: Vahaolana fanontana mitsangana ho an'ny rindrina anatiny na ivelany | Martech Zone
Ny mpanonta rindrina: Vahaolana fanontana mitsangana ho an'ny rindrina anatiny na ivelany
Alakamisy, Jona 3, 2021 Alakamisy, Jona 3, 2021 Douglas Karr
Manana namako iray izay mamolavola sy mandoko ny rindrina amin'ny rindrina ary manao asa mahatalanjona. Na dia fampiasam-bola tsy mampino aza ity zavakanto ity izay afaka manova ny sehatr'asa na ny toerana fivarotana, ny fahaizana mandrafitra sy mandoko sary marindrano amin'ny habaka mitsangana dia navela hamehezana ny fametrahana na an'ny mpanakanto. Nipoitra ny teknolojia fanontana vaovao izay hanova izany, na dia… mpanonta rindrina mitsangana.
Ny mpanonta rindrina
Ny haitao farany fanontam-pirinty farany nataon'ny Wall Printer dia mamela ny sary hosodoko elektronika misy sary, sary, sary hosodoko na sary an-tsoratra amin'ny toerana ivelany na ivelany. Ny masin'izy ireo dia natao hanonta amin'ny faritra maro, toy ny plaster, sheetrock, vera, vy, biriky, beton, vinyl ary hazo.
Tao anatin'ny roa taona latsaka dia efa namidin'ny The Wall Printer ny milina tamina orinasa 40 mahery nanerana an'i Amerika Avaratra sy atsimo, ary UK. Ireo mpanonta printy mitsangana dia manolotra fampiasana tsy manam-paharoa, azo ampiharina ary mahafinaritra izay mandika ho fotoana tena mety amin'ny orinasa sy ny mpandraharaha mandray azy ireo.
Topazo maso ny fampiasan'ny mpanjifa sasany na ny kasainao hampiasana ireo milina ireo:
Mpizara iray Florida vao haingana, MiArte ao Naples FL, taorian'ny fanontana ny sary hosodoko 5'x 8 'voalohany ary nandefa sary tany amin'ny Facebook dia nilaza hoe: "Gaga be izahay tamin'ny valiny. dia toy ny hoe niandry an'ity fotoana ity ny olona. ” Mpanjifa iray no namaly ary nanao fifanekena tamin'ity Wall Printer ity hanonta sary hosodoko roa 8 'amin'ny rindrina, izay natsofoka tao anaty valindrihana, ka namorona sary hosodoko vita amin'ny rindrina.
Sampan-draharahan'ny fanatanjahantena D1 ambony no mitady hividy Masinina TWP hampiasaina amin'ny fampisehoana amin'ny lalao baolina kitra, baskety, ary toerana hafa sy hetsika ara-panatanjahantena ary eo amin'ny rindrin'ny tranon'ny atletisma, alohan'ny lalao an-trano lehibe.
Ireo mpihaingo anatiny dia nividy ireo milina mba hanampy amin'ny fampidirana fampisehoana ireo fialambolin'ny mpanjifan'izy ireo manokana na ilain'ny zavakanto amin'ny rindrina amin'ny toeram-ponenana sy toeram-piasana.
Raha nitady ny zavatra lehibe manaraka i Paul Baron, mpandraharaha serial, dia nahita foto-kevitra vaovao izy: fanontam-pirinty. Hevitra vaovao any Amerika izy io saingy fantatra nandritra ny taona maro nanerana an'i Azia, India, Moyen Orient ary Eropa. Nanintona azy ny hevitra momba ny hosodoko hosodoko anaty trano sy an-kalamanjana ho an'ny artista sy tompona trano. Ny fanontana amin'ny rindrin'ny rindrina misy, azo antoka sy marina, dia nanintona azy.
Rehefa avy nijery fatratra ireo mpanamboatra vitsivitsy manolotra an'ity haitao vaovao ity izy, tamin'ny taona 2019 dia namarana ny fifanarahana tamin'ny mpanamboatra tranainy sy lehibe indrindra ao Azia i Paul. Nisafidy azy ireo izy, hoy izy, satria ny lanja sy ny vidiny dia natambatra tsara tamin'ny kalitaon'ny famolavolana sy ny fihaonana, ary ny fanohanana hahafahana mizana hamaly ny filan'ny tsena amerikana avaratra sy atsimo.
Nanomboka teo dia nivarotra fizarana fizarana amina tsena mihoatra ny 20 ilay orinasa ary nanampy tamin'ny fananganana orinasa vaovao manerana ny tanibe Etazonia sy Kanada, Amerika atsimo, UK ary Puerto Rico. Manasa mpanjifa vaovao hianatra momba ny Fanontam-pirinty sy ny fotoana fandraharahana mahasarika asehon'izy ireo izy ireo.
Ny Wall Printer dia hitatra manerana an'i Amerika Avaratra sy atsimo, UK, ary The Caribbean mandritra ny taona vitsivitsy. Rehefa mihalehibe ny orinasa mpanonta rindrina dia hanohana azy ireo amin'ny vahaolana azo tsapain-tanana, inks, kojakoja, serivisy miavaka ary marketing ny orinasa hanitarana ny serivisy fanontam-pirinty mahomby ao an-toerana.
Raha ny teknolojia ao ambadiky ny fanontana marindrano dia nampiasaina iraisam-pirenena nandritra ny taona maro dia azon'ny orinasa manerana an'i Amerika Avaratra sy atsimo izany.
Paul Baron, CEO an'ny Wall Print USA
Misy hevitra vaovao mipoitra hatrany avy amin'ny Wall Printer-dry zareo satria ny mpanjifa dia mangataka ny kanto nomerika amin'ny rindrina isan-karazany, na any anaty trano na any ivelany.
Mianara bebe kokoa momba ny mpanonta ny rindrina
Tags: fanontana muralireo sary amin'ny rindrinany mpanonta rindrinapirinty mitsanganarindrina rindrinampanonta rindrina
UltraSMSScript: Vidio ny sehatra SMS, MMS, ary Voice Marketing feno miaraka amin'ny API